खुशीको खबर: सामान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर, यसरी भर्नुहोस् भिसाको लागि आवेदन !! – List Khabar
Home / समाचार / खुशीको खबर: सामान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर, यसरी भर्नुहोस् भिसाको लागि आवेदन !!
admin July 8, 2021 समाचार Leaveacomment 122 Views
अमेरिकाले कामदार (ए’चवान बी भिसा) खुल्ला गरेको छ ।आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तो’किएको अ’वधिभित्र आ’वेदकले अनलाइन द’र्ता गराउनु पर्नेछ ।
तर द’र्ता भने मार्च १ को दिउसो १२ बजेपछिमात्र गर्नुपर्नेछ ।मार्च २० भित्र प्रयाप्त आ’वेदनहरु आएको ख’ण्डमा यु’एससीआईएसले मार्च २० को दिउसो १२ बजे नै अनलाइन द’र्ता ब’न्द गर्नेछ ।त्यसपछि लो’टरी प्र’णालीबाट छ’नौट गरेर मार्चको ३१ सम्म छ’नौट भएका हरुलाई सु’चित गरिनेछ।
त्यसपछि छ’नौट भएका आ’वेदनउपरमात्र आ’वेदकले ए’चवान बी भिसाका लागि प्र’कृया अगाडि ब’ढाउन सक्नेछन् । सबै प्रकृया पूरा गरेको ख’ण्डमा उनीहरुले भि’सा प्राप्त गर्नसक्नेछन् ।उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका ए’चवानबी कामदारका लागि यो बर्षदेखि नयाँ प्रकृयाको था’लनी हुन लागेको हो।
Previous दाङ’मा एक १० व’र्षीय बाल’कको खोला’मा डुबेर मृत्यु
Next पाल्पामा पहिरोले ६ घर पुरिँदा एकको मृत्यु, एक बालक समेत बेपत्ता, सात घाइते -कस्तो छ पछिल्लो अवस्था ?